Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/19 Martsa 2014 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/19 Martsa 2014
Mbola (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
Mbola hita an-tserasera ireo kinasa tamin'ny herintaona ary ny ankamaroan'izy ireo dia ahitana lalana ahafahanao mifandray amin'ireo nirotsaka amin'ny alalan'ny Twitter na Facebook. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
faisais (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nirotsaka (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
manampy (nitranga in-2) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
veut (nitranga in-1) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fiarahamiasa (nitranga in-1) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fandraketana (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
oniversite (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
akora (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fisoratana (nitranga in-1) : Nahazo fisoratana anarana anarivony avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
apprennent (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
anglais (nitranga in-1) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tsatokaty (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon · Nandika Naomy
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
momba (nitranga in-5) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Nandritra (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tian' (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Facebook (nitranga in-2) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hafanana (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Sénamé (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
utilisées (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
afisy (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hevitra (nitranga in-3) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ataonareo (nitranga in-2) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Izany (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
écologique (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Mampandray (nitranga in-1) : Mampandray anjara mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana “tsy ampy solontena” an-tserasera, na izany eo amin'ny isan'ny mponina, ara-pitenenana, na ara-jeografika. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Fanontaniana (nitranga in-1) : Jereo ny Fanontaniana mitranga matetika hahalalanareo ny fampafantarana fanampiny. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
lisansa (nitranga in-2) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
izao (nitranga in-3) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
projet (nitranga in-2) : ]
Je travaille actuellement avec des étudiants en licence de géographie à l'université de Lomé sur un projet qu'ils veulent faire : la cartographie sur OpenStreetMap et la réalisation d'un petit guide de l'université pour les étrangers et les nouveaux bacheliers et l'affichage de cartes imprimées en grands formats un peu partout dans l'université. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Mamokatra (nitranga in-1) : Mamokatra tantara nomerika amin'ny lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina (fikambanana). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mpamorona (nitranga in-2) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
We just brought it and put it together and connected all the stuff and made it work [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sont (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
elektronika (nitranga in-2) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sosialy (nitranga in-2) : Mampiasa fitaovana fifampitam-baovao ho an'olo-tsotra sy sehatra media sosialy misokatra ho an'ny rehetra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
imprimante (nitranga in-2) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nianatra (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Global (nitranga in-3) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
oniversiten' (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
vaovao (nitranga in-2) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
anay (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
miangavy (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hirotsaka (nitranga in-1) : Nanontany an'i Amadou momba izany izahay:
Rising Voices: Inona no ataonareo hoan'ireo mpianatra mba hirotsaka antsehatra amin'ny OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
malalaka (nitranga in-2) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fifankahazoana (nitranga in-1) : TOROLALANA
Ny Rising Voices dia mitady kinasa izay mitovy iraka aminay amin'ny fampiasana ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra an-tserasera ho fitaovana ahafahana mizakatena, fifankahazoana eo amin'ny samy olona, ary ny fivoarana ara-tsosialy. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
trandrahina (nitranga in-1) : Ny fanantenanay dia mba afa-mifandray sy miasa miaraka ny fikambanana (fiarahamonina) mifanakaiky na mitovy lohahevitra trandrahina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
anao (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
actuellement (nitranga in-1) : ]
mikirakira (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Saingy (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanao (nitranga in-2) : ] Nifandray tamin'ireo mpianatra jeografia aho ary nanolo-kevitra mba hanao fiofanana momba ny OpenStreetMap, tahaka ny efa nataoko tamin'ny WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanangana (nitranga in-1) : Omenay lanja manokana ireo kinasa miezaka ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny mpametraka volavolan-kevitra hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
toerana (nitranga in-2) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mizara (nitranga in-1) : Raha tsy afaka ny mizara ny firotsahanao malalaka ianao noho ny antony ara-piarovana, dia afa-mametraka tsy ankiteniteny (tsy ampahibemaso). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Africaine (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
afaka (nitranga in-3) : Raha tsy afaka ny mizara ny firotsahanao malalaka ianao noho ny antony ara-piarovana, dia afa-mametraka tsy ankiteniteny (tsy ampahibemaso). (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hijery (nitranga in-1) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nandray (nitranga in-1) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mihevitra (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
folo (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nampiasaina (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mihoatra (nitranga in-1) : Nahazo fisoratana anarana anarivony avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
proposé (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanome (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
rehetra (nitranga in-6) : Mampiasa fitaovana fifampitam-baovao ho an'olo-tsotra sy sehatra media sosialy misokatra ho an'ny rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
cela (nitranga in-2) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mijery (nitranga in-1) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
W. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tontolo (nitranga in-2) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
récupères (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Misy (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
WoeLab (nitranga in-7) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
siny (nitranga in-2) : Voalohany indrindra, ny anarana hoe Jerry dia avy amin'ny teny Anglisy hoe Jerrycan, izay midika hoe goro (*3) na siny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
haneho (nitranga in-1) : Vantany mivoaka ny kinasa, dia asainay ny mpifaninana hizara azy amin'ny tambajotrany, mangataka ny hafa haneho hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
feony (nitranga in-1) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nahoana (nitranga in-1) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
notsimpotsimponina (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
informatika (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
iray (nitranga in-3) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fiotrehana (nitranga in-2) : Sehatra misokatra ny WoeLab, toerana fiotrehana (*2) ara-teknolojika mampihaona ireo tanora mpankafy izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
licence (nitranga in-1) : ]
jeografia (nitranga in-2) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ahafahanao (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
anarana (nitranga in-3) : Nahazo fisoratana anarana anarivony avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mpikambana (nitranga in-7) : Mampandray anjara mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana “tsy ampy solontena” an-tserasera, na izany eo amin'ny isan'ny mponina, ara-pitenenana, na ara-jeografika. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Naomy (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
solosaina (nitranga in-3) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tompon' (nitranga in-1) : Mitady tompon'andraikitra kinasa (tetikasa) te-hizara fahaizana sy fahalalana amin'ny hafa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
espace (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
Le Woelab est un espace ouvert, un lieu d'incubation technologique, ça rassemble les jeunes passionnés [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Nanontany (nitranga in-1) : Nanontany an'i Amadou momba izany izahay:
tahiry (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nahaliana (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
notsimponina (nitranga in-2) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hampielezanao (nitranga in-1) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tolotra (nitranga in-1) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
Famoahana ny valiny: Alarobia 7 Mey 2014 (mety hisy fiovany araka ny isan'ny tolotra hotsaraina). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
indrindra (nitranga in-1) : Voalohany indrindra, ny anarana hoe Jerry dia avy amin'ny teny Anglisy hoe Jerrycan, izay midika hoe goro (*3) na siny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Niresaka (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fivoarana (nitranga in-1) : TOROLALANA
habaka (nitranga in-2) : habaka Video tahaka ny YouTube sy Vimeo, na fanaovan-tsarintany tahaka ny OpenStreetMaps. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fametrahana (nitranga in-1) : Aza misalasala manontany amin'ny alalan'ny fametrahana fanehoa-kevitra na fandefasana imailaka amin'ny alalan'ny Takelaka Fifandraisana ato aminay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Rehefa (nitranga in-1) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hampiakatra (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
brought (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
kapila (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
miezaka (nitranga in-1) : Omenay lanja manokana ireo kinasa miezaka ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny mpametraka volavolan-kevitra hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Jerrycan (nitranga in-2) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fotsiny (nitranga in-2) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
fako (nitranga in-1) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mpifantina (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
Toy izao manaraka izao ny fizotry ny fifaninanana: Fisokafan'ny fandrotsahana: Alarobia 12 Marsa 2014 Ny mpifaninana dia mametraka ny kinasa santatra ao amin'ny sehatray amin'ny teny anglisy (mariho fa nilaina izany satria io no teny iraisan'ny komity mpifantina avy ato aminay). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
manaraka (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
from (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
miteny (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ivelany (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Amadou (nitranga in-2) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Niainga (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
zoro (nitranga in-1) : Mitady tantara mampafantatra ny fiarahamonina izahay, ny fanamby na ny fahombiazany, voambara avy amin'ny zoro manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
OpenStreetMaps (nitranga in-1) : habaka Video tahaka ny YouTube sy Vimeo, na fanaovan-tsarintany tahaka ny OpenStreetMaps. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
telo (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
propres (nitranga in-1) : ]
J'ai formé des etudiants en Licence sur OSM et sur Qgis jusqu'a ce qu'ils puissent relaiser leur propres cartes en utilisant la donnée de OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
vous (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
laboratoara (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
StumbleUpon (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
atsipy (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
misitraka (nitranga in-1) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nanatsonga (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
santatra (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
mahalala (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
kinasany (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fiovany (nitranga in-1) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
Agbodjinou (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Mirary (nitranga in-1) : Mirary soa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
natolotry (nitranga in-1) : Ny kinasa rehetra dia hotsarain'ny komity ahitana ireo mpikambana avy ato amin'ny fiarahamonina Global Voices, ary ao anatin'ireny ireo efa nahazo tamin'ny vatsy madinika natolotry ny Rising Voices taloha. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fandrotsahana (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
pour (nitranga in-2) : ]
Video (nitranga in-1) : habaka Video tahaka ny YouTube sy Vimeo, na fanaovan-tsarintany tahaka ny OpenStreetMaps. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
eriteritrareo (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hamaly amin'ny fomba fohy (fero ny isan'ny caracteres) hahafahanareo mandrafitra ny eriteritrareo hankany amin'ny tena zavadehibe. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fohy (nitranga in-2) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Manasa (nitranga in-1) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nampanaovna (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fanampiny (nitranga in-1) : Jereo ny Fanontaniana mitranga matetika hahalalanareo ny fampafantarana fanampiny. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fifandraisana (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Jerry (nitranga in-4) : ]
Jerry c'est un ordinateur. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
oniverisite (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mitranga (nitranga in-1) : Jereo ny Fanontaniana mitranga matetika hahalalanareo ny fampafantarana fanampiny. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
intéressé (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
apetraho (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fahombiazana (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
volana (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
hizava (nitranga in-1) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
objets (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fahombiazany (nitranga in-1) : Mitady tantara mampafantatra ny fiarahamonina izahay, ny fanamby na ny fahombiazany, voambara avy amin'ny zoro manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
souvent (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tanterahina (nitranga in-1) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
hasongadia (nitranga in-1) : Hiditra ao amin'ny tambajotran'ny Rising Voices ireo tetikasa nahazo vatsy ary hasongadia ato amin'ny Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Hatramy (nitranga in-1) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
cartographie (nitranga in-1) : ]
nanaovna (nitranga in-1) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
zavamisy (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
ireo (nitranga in-27) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
vient (nitranga in-1) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Omenay (nitranga in-1) : Omenay lanja manokana ireo kinasa miezaka ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny mpametraka volavolan-kevitra hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hilazalazany (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Mandrisika (nitranga in-3) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Ireny (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
midika (nitranga in-2) : Voalohany indrindra, ny anarana hoe Jerry dia avy amin'ny teny Anglisy hoe Jerrycan, izay midika hoe goro (*3) na siny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Nanome (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
grands (nitranga in-1) : ]
hotsaray (nitranga in-1) : Ny kinasa rehetra dia hotsarain'ny komity ahitana ireo mpikambana avy ato amin'ny fiarahamonina Global Voices, ary ao anatin'ireny ireo efa nahazo tamin'ny vatsy madinika natolotry ny Rising Voices taloha. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mifanakaiky (nitranga in-1) : Ny fanantenanay dia mba afa-mifandray sy miasa miaraka ny fikambanana (fiarahamonina) mifanakaiky na mitovy lohahevitra trandrahina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Nahavita (nitranga in-1) : Nahavita namorona printy 3D tamin'ny alalan'ireo fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fanariam-pako izahay, printy ekolojika. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanolotra (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mangataka (nitranga in-1) : Vantany mivoaka ny kinasa, dia asainay ny mpifaninana hizara azy amin'ny tambajotrany, mangataka ny hafa haneho hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
media (nitranga in-1) : Mampiasa fitaovana fifampitam-baovao ho an'olo-tsotra sy sehatra media sosialy misokatra ho an'ny rehetra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nous (nitranga in-2) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Afate (nitranga in-2) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
geographie (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mpilatsaka (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ireny (nitranga in-2) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
voyez (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Gabriela (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
maintsy (nitranga in-1) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Nifandray (nitranga in-1) : ] Nifandray tamin'ireo mpianatra jeografia aho ary nanolo-kevitra mba hanao fiofanana momba ny OpenStreetMap, tahaka ny efa nataoko tamin'ny WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
comme (nitranga in-2) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fampiasana (nitranga in-3) : TOROLALANA
Ny Rising Voices dia mitady kinasa izay mitovy iraka aminay amin'ny fampiasana ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra an-tserasera ho fitaovana ahafahana mizakatena, fifankahazoana eo amin'ny samy olona, ary ny fivoarana ara-tsosialy. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fijery (nitranga in-1) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
vita (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
mamaritra (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
imprimées (nitranga in-1) : ]
mais (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mizakatena (nitranga in-1) : TOROLALANA
matoky (nitranga in-1) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
passionnés (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
hahafahanareo (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hamaly amin'ny fomba fohy (fero ny isan'ny caracteres) hahafahanareo mandrafitra ny eriteritrareo hankany amin'ny tena zavadehibe. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Qgis (nitranga in-2) : ]
mitovitovy (nitranga in-1) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mametaka (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
2014 (nitranga in-5) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mampafantatra (nitranga in-1) : Mitady tantara mampafantatra ny fiarahamonina izahay, ny fanamby na ny fahombiazany, voambara avy amin'ny zoro manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
voambara (nitranga in-1) : Mitady tantara mampafantatra ny fiarahamonina izahay, ny fanamby na ny fahombiazany, voambara avy amin'ny zoro manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
2013 (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
2012 (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fiofanana (nitranga in-2) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
étrangers (nitranga in-1) : ]
blaogy (nitranga in-2) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
étudiants (nitranga in-1) : ]
komity (nitranga in-2) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
usagers (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
faire (nitranga in-3) : ]
Fifandraisana (nitranga in-1) : Aza misalasala manontany amin'ny alalan'ny fametrahana fanehoa-kevitra na fandefasana imailaka amin'ny alalan'ny Takelaka Fifandraisana ato aminay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Amerikana (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mazava (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nisoratra (nitranga in-1) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
kinasanareo (nitranga in-3) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Calderon (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
fanohanana (nitranga in-2) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tanjon' (nitranga in-1) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ankamaroan' (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
mety (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hanampiana (nitranga in-2) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Jereo (nitranga in-2) : Jereo ny lisitry ny kinasa (tetikasa) misy amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo vatsy teo aloha ho fakanareo ohatra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
misokatra (nitranga in-2) : Mampiasa fitaovana fifampitam-baovao ho an'olo-tsotra sy sehatra media sosialy misokatra ho an'ny rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mitady (nitranga in-3) : TOROLALANA
partir (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
quelque (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nefa (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nanazava (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
formé (nitranga in-1) : ]
vonona (nitranga in-1) : Rehefa nandray anjara tamin'ny atrikasam-piofanana ny mpandray anjara dia vonona hizava ny feony amin'izao tontolo izao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hizara (nitranga in-2) : PAIKA MANGARAHARA
Mandrisika anareo izahay hizara ny kinasanareo eo amin'ny sehatra an-tseraseranay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nampifandray (nitranga in-1) : Naka sy nanambatra ireo faikan-javatra izahay ary nampifandray ireo singa rehetra mba hampandeha izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
voalohany (nitranga in-1) : Ity no fablab voalohany ao Togo. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fitaovana (nitranga in-11) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
olona (nitranga in-3) : TOROLALANA
mpamono (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Lomé (nitranga in-2) : ]
manerana (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
matériels (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
formation (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
dire (nitranga in-1) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
rassemble (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
ankamaroany (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nahita (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
misalasala (nitranga in-1) : Aza misalasala manontany amin'ny alalan'ny fametrahana fanehoa-kevitra na fandefasana imailaka amin'ny alalan'ny Takelaka Fifandraisana ato aminay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Woelab (nitranga in-3) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
Garcia (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
fanontaniana (nitranga in-2) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
voasolotena (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
torolalan' (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mikasika (nitranga in-1) : ]
Nampiofana mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa mikasika ny OpenStreetMap aho sy mokasika ny Qgis mandra-pahavitan'izy ireo manatontosa ny sarintaniny manokana amin'ny fampiasana ny ango-tahiry OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mpametraka (nitranga in-1) : Omenay lanja manokana ireo kinasa miezaka ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny mpametraka volavolan-kevitra hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
veulent (nitranga in-2) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nakambakambanay (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sahy (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mivantana (nitranga in-1) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
rano (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
famenoana (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
donc (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fantatra (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
misy (nitranga in-4) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
natontanay (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mampivoitra (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
cartes (nitranga in-4) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
pejy (nitranga in-2) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Fetra (nitranga in-1) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
avec (nitranga in-3) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
rentré (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
montons (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanangonana (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
trandraho (nitranga in-1) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
bidon (nitranga in-2) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fifaninanana (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
sehatra (nitranga in-3) : Mampiasa fitaovana fifampitam-baovao ho an'olo-tsotra sy sehatra media sosialy misokatra ho an'ny rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Radioteca (nitranga in-1) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mpianatra (nitranga in-5) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nadika (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
déjà (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hilazalaza (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
aotrika (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mivoaka (nitranga in-1) : Vantany mivoaka ny kinasa, dia asainay ny mpifaninana hizara azy amin'ny tambajotrany, mangataka ny hafa haneho hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hanina (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
theorie (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Koffy (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Hiditra (nitranga in-1) : Hiditra ao amin'ny tambajotran'ny Rising Voices ireo tetikasa nahazo vatsy ary hasongadia ato amin'ny Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
ifotony (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
dans (nitranga in-1) : ]
isankarazany (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nihena (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
herintaona (nitranga in-2) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
Mbola hita an-tserasera ireo kinasa tamin'ny herintaona ary ny ankamaroan'izy ireo dia ahitana lalana ahafahanao mifandray amin'ireo nirotsaka amin'ny alalan'ny Twitter na Facebook. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
satria (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
hanamorana (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
namboarina (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
sahany (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nataoko (nitranga in-1) : ] Nifandray tamin'ireo mpianatra jeografia aho ary nanolo-kevitra mba hanao fiofanana momba ny OpenStreetMap, tahaka ny efa nataoko tamin'ny WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
loka (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
median' (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
lanja (nitranga in-1) : Omenay lanja manokana ireo kinasa miezaka ny hanangana fiaraha-miasa amin'ny mpametraka volavolan-kevitra hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mandray (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mifandray (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
antsehatra (nitranga in-1) : Nanontany an'i Amadou momba izany izahay:
materials (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
bacheliers (nitranga in-1) : ]
nahazo (nitranga in-3) : Hiditra ao amin'ny tambajotran'ny Rising Voices ireo tetikasa nahazo vatsy ary hasongadia ato amin'ny Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
manatontosa (nitranga in-2) : Tsy mba afaka nanararaotra nanao fampiharana izy ireo ka ny tetikasa OpenStreetMap no hahafahan'izy ireo manatontosa izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mitsahatra (nitranga in-1) : Antoky ny fananganana fiarahamonim-pitantarana nomerika ny fanohanana tsy mitsahatra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Mampiasa (nitranga in-1) : Mampiasa fitaovana fifampitam-baovao ho an'olo-tsotra sy sehatra media sosialy misokatra ho an'ny rehetra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
technologique (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
Anglisy (nitranga in-1) : Voalohany indrindra, ny anarana hoe Jerry dia avy amin'ny teny Anglisy hoe Jerrycan, izay midika hoe goro (*3) na siny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nitarika (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Togoley (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
TOROLALANA (nitranga in-1) : TOROLALANA
taloha (nitranga in-2) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
connected (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
tsidiho (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
DINGAN' (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
akondro (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tonga (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hatramy (nitranga in-2) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mafonja (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Voices (nitranga in-7) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
miasa (nitranga in-2) : Ny fanantenanay dia mba afa-mifandray sy miasa miaraka ny fikambanana (fiarahamonina) mifanakaiky na mitovy lohahevitra trandrahina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nilaina (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
hamaly (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hamaly amin'ny fomba fohy (fero ny isan'ny caracteres) hahafahanareo mandrafitra ny eriteritrareo hankany amin'ny tena zavadehibe. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
faritra (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hataonay (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
vahoaka (nitranga in-1) : (*1) hamahoahana [ny teknolojia]: hanao izay hahazoan'ny vahoaka rehetra [ny teknolojia] fr: démocratisation [de la technologie]. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hampiasa (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
loatra (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
drafitry (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mahafantatra (nitranga in-1) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
izay (nitranga in-8) : TOROLALANA
ahafahana (nitranga in-1) : TOROLALANA
Vantany (nitranga in-1) : Vantany mivoaka ny kinasa, dia asainay ny mpifaninana hizara azy amin'ny tambajotrany, mangataka ny hafa haneho hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
miotrika (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
kinasa (nitranga in-13) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
vakio (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
fanamby (nitranga in-1) : Mitady tantara mampafantatra ny fiarahamonina izahay, ny fanamby na ny fahombiazany, voambara avy amin'ny zoro manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
araka (nitranga in-3) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
Famoahana ny valiny: Alarobia 7 Mey 2014 (mety hisy fiovany araka ny isan'ny tolotra hotsaraina). (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mitodika (nitranga in-1) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
aminay (nitranga in-2) : TOROLALANA
tranainy (nitranga in-1) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
aminao (nitranga in-1) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
asiana (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
izahay (nitranga in-14) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
imprimons (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ahafahan' (nitranga in-1) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Frantsay (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
alalan' (nitranga in-10) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
lohahevitra (nitranga in-4) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Fisokafan' (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
fahalalana (nitranga in-1) : Mitady tompon'andraikitra kinasa (tetikasa) te-hizara fahaizana sy fahalalana amin'ny hafa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
leur (nitranga in-3) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hampiditra (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
endrika (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sarintany (nitranga in-2) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
permettait (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nouveaux (nitranga in-1) : ]
relaiser (nitranga in-1) : ]
terrain (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
reddit (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
puissent (nitranga in-1) : ]
données (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
vondron' (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tambajotrany (nitranga in-1) : Vantany mivoaka ny kinasa, dia asainay ny mpifaninana hizara azy amin'ny tambajotrany, mangataka ny hafa haneho hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fahaizana (nitranga in-2) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nanampy (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
recyclés (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hahazoana (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
jeter (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tena (nitranga in-3) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ordinateur (nitranga in-2) : ]
teny (nitranga in-4) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
Toy izao manaraka izao ny fizotry ny fifaninanana: Fisokafan'ny fandrotsahana: Alarobia 12 Marsa 2014 Ny mpifaninana dia mametraka ny kinasa santatra ao amin'ny sehatray amin'ny teny anglisy (mariho fa nilaina izany satria io no teny iraisan'ny komity mpifantina avy ato aminay). (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
chaque (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
azonareo (nitranga in-1) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
voatonta (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hisy (nitranga in-1) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
jusqu' (nitranga in-1) : ]
Nandika (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
nanohana (nitranga in-1) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tambajotran' (nitranga in-1) : Hiditra ao amin'ny tambajotran'ny Rising Voices ireo tetikasa nahazo vatsy ary hasongadia ato amin'ny Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Tadiavinay (nitranga in-1) : Tadiavinay ireo kinasa:
1. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
vondrona (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tantara (nitranga in-2) : Mamokatra tantara nomerika amin'ny lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina (fikambanana). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Satria (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mailaka (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nomerika (nitranga in-4) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Raha (nitranga in-3) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Mizara (nitranga in-1) : Mizara vaovao ao amin'ny pejy Facebook-ny [fr] ny Woelab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fizotry (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
Mety (nitranga in-2) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hahazoan' (nitranga in-1) : (*1) hamahoahana [ny teknolojia]: hanao izay hahazoan'ny vahoaka rehetra [ny teknolojia] fr: démocratisation [de la technologie]. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
miaraka (nitranga in-2) : Ny fanantenanay dia mba afa-mifandray sy miasa miaraka ny fikambanana (fiarahamonina) mifanakaiky na mitovy lohahevitra trandrahina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
vatsy (nitranga in-5) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tout (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tahaka (nitranga in-6) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mokasika (nitranga in-1) : ]
principalement (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
aminy (nitranga in-1) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
ekolojika (nitranga in-1) : Nahavita namorona printy 3D tamin'ny alalan'ireo fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fanariam-pako izahay, printy ekolojika. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hahatsiaro (nitranga in-1) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
taona (nitranga in-3) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
andraikitra (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
masaka (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
seulement (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
olombelona (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hoan' (nitranga in-3) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
décharges (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sarintaniny (nitranga in-1) : ]
ianao (nitranga in-3) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
maro (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
collecter (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sary (nitranga in-1) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
ankiteniteny (nitranga in-1) : Raha tsy afaka ny mizara ny firotsahanao malalaka ianao noho ny antony ara-piarovana, dia afa-mametraka tsy ankiteniteny (tsy ampahibemaso). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
anjara (nitranga in-5) : Mampandray anjara mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana “tsy ampy solontena” an-tserasera, na izany eo amin'ny isan'ny mponina, ara-pitenenana, na ara-jeografika. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Vimeo (nitranga in-1) : habaka Video tahaka ny YouTube sy Vimeo, na fanaovan-tsarintany tahaka ny OpenStreetMaps. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hampisosasosa (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mpifaninana (nitranga in-2) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
Audacity (nitranga in-1) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
démocratisation (nitranga in-1) : (*1) hamahoahana [ny teknolojia]: hanao izay hahazoan'ny vahoaka rehetra [ny teknolojia] fr: démocratisation [de la technologie]. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
enina (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mpitarika (nitranga in-2) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Voice (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
akony (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
Septambra (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
misidina (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
look (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
googleplus (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
nanao (nitranga in-1) : Tsy mba afaka nanararaotra nanao fampiharana izy ireo ka ny tetikasa OpenStreetMap no hahafahan'izy ireo manatontosa izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
vahiny (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tany (nitranga in-3) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
formats (nitranga in-1) : ]
hampandeha (nitranga in-1) : Naka sy nanambatra ireo faikan-javatra izahay ary nampifandray ireo singa rehetra mba hampandeha izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
antony (nitranga in-1) : Raha tsy afaka ny mizara ny firotsahanao malalaka ianao noho ny antony ara-piarovana, dia afa-mametraka tsy ankiteniteny (tsy ampahibemaso). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
asainay (nitranga in-1) : Vantany mivoaka ny kinasa, dia asainay ny mpifaninana hizara azy amin'ny tambajotrany, mangataka ny hafa haneho hevitra sy ny tolo-kevitra avy amin'ny hafa. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
bitika (nitranga in-2) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tambajotra (nitranga in-1) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
travaille (nitranga in-1) : ]
beaucoup (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
aminareo (nitranga in-1) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
FANDROTSAHANA (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
Famoahana (nitranga in-1) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
fanazarana (nitranga in-4) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
partout (nitranga in-1) : ]
gens (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mametraka (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
hita (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
fiarahamonina (nitranga in-5) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
votoaty (nitranga in-1) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
etudiants (nitranga in-2) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
samy (nitranga in-1) : TOROLALANA
miaro (nitranga in-1) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fakanareo (nitranga in-1) : Jereo ny lisitry ny kinasa (tetikasa) misy amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo vatsy teo aloha ho fakanareo ohatra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
zavatra (nitranga in-2) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
hahalalanareo (nitranga in-1) : Jereo ny Fanontaniana mitranga matetika hahalalanareo ny fampafantarana fanampiny. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Solosaina (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
lehibe (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fandefasana (nitranga in-1) : Aza misalasala manontany amin'ny alalan'ny fametrahana fanehoa-kevitra na fandefasana imailaka amin'ny alalan'ny Takelaka Fifandraisana ato aminay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
disques (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fanantenanay (nitranga in-1) : Ny fanantenanay dia mba afa-mifandray sy miasa miaraka ny fikambanana (fiarahamonina) mifanakaiky na mitovy lohahevitra trandrahina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
anglisy (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
azafady (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
iraka (nitranga in-1) : TOROLALANA
Bitika (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
nanambatra (nitranga in-1) : Naka sy nanambatra ireo faikan-javatra izahay ary nampifandray ireo singa rehetra mba hampandeha izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mihitsy (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ampy (nitranga in-1) : Mampandray anjara mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana “tsy ampy solontena” an-tserasera, na izany eo amin'ny isan'ny mponina, ara-pitenenana, na ara-jeografika. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
pense (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
manana (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fampiharana (nitranga in-1) : Tsy mba afaka nanararaotra nanao fampiharana izy ireo ka ny tetikasa OpenStreetMap no hahafahan'izy ireo manatontosa izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Mitady (nitranga in-3) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
just (nitranga in-2) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
firotsahanao (nitranga in-1) : Raha tsy afaka ny mizara ny firotsahanao malalaka ianao noho ny antony ara-piarovana, dia afa-mametraka tsy ankiteniteny (tsy ampahibemaso). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
géographie (nitranga in-1) : ]
Marsa (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
SoundCloud (nitranga in-1) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Sehatra (nitranga in-2) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
hitanareo (nitranga in-1) : Solosaina nakambakambanay ao amin'ny siny araka ny hitanareo, izay akora informatika notsimpotsimponina toy ny kapila mafonja (disque dur), renin-karatra efa nampiasaina sy tian'ny olona atsipy olona ny ankamaroany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fampiasàna (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
YouTube (nitranga in-1) : habaka Video tahaka ny YouTube sy Vimeo, na fanaovan-tsarintany tahaka ny OpenStreetMaps. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
aloha (nitranga in-2) : Jereo ny lisitry ny kinasa (tetikasa) misy amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo vatsy teo aloha ho fakanareo ohatra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
printy (nitranga in-7) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
singa (nitranga in-1) : Naka sy nanambatra ireo faikan-javatra izahay ary nampifandray ireo singa rehetra mba hampandeha izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanomezana (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
kely (nitranga in-1) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fananganana (nitranga in-2) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
possible (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
natao (nitranga in-1) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Nampiasa (nitranga in-1) : ] Nampiasa ny fahaiza-maka sary an-tsaina tamin'ny alalan'ireo fitaovana ireo izahay ary mitodika fotsiny tany amin'ireo solosaina tranainy …ary mijery raha azo tanterahina
Manome (nitranga in-1) : Manome fanazarana, fitarihan-dalana ary fahaiza-mitarika. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
part (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
stuff (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
izany (nitranga in-10) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
électroniques (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mponina (nitranga in-2) : Mampandray anjara mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana “tsy ampy solontena” an-tserasera, na izany eo amin'ny isan'ny mponina, ara-pitenenana, na ara-jeografika. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
anarivony (nitranga in-1) : Nahazo fisoratana anarana anarivony avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Rising (nitranga in-6) : Hiditra ao amin'ny tambajotran'ny Rising Voices ireo tetikasa nahazo vatsy ary hasongadia ato amin'ny Global Voices. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hahafahan' (nitranga in-2) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
manokana (nitranga in-5) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
valisoa (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fotoana (nitranga in-1) : Jereo ny lisitry ny kinasa (tetikasa) misy amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo vatsy teo aloha ho fakanareo ohatra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
twitter (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
PAIKA (nitranga in-1) : PAIKA MANGARAHARA
Avrily (nitranga in-1) : Fetra farany: Alarobia 9 Avrily 2014 amin'ny 23:59 GMT
ahitanareo (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
iainana (nitranga in-1) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
teoria (nitranga in-1) : Saingy mihevitra aho fa ny fampiasàna GPS sy ireo sarintany natontanay printy hanangonana tahiry eny ifotony no tena nahaliana azy ireo: efa nianatra izany izy ireo teo aloha saingy teoria fotsiny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ouvert (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
OpenStreetMap (nitranga in-12) : ]
Antoky (nitranga in-1) : Antoky ny fananganana fiarahamonim-pitantarana nomerika ny fanohanana tsy mitsahatra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mpanonta (nitranga in-2) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
zavadehibe (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hamaly amin'ny fomba fohy (fero ny isan'ny caracteres) hahafahanareo mandrafitra ny eriteritrareo hankany amin'ny tena zavadehibe. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mpankafy (nitranga in-1) : Sehatra misokatra ny WoeLab, toerana fiotrehana (*2) ara-teknolojika mampihaona ireo tanora mpankafy izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
miseho (nitranga in-1) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Togo (nitranga in-2) : Ity no fablab voalohany ao Togo. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
firenena (nitranga in-3) : Nahazo fisoratana anarana anarivony avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
contact (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanaovana (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Takelaka (nitranga in-1) : Aza misalasala manontany amin'ny alalan'ny fametrahana fanehoa-kevitra na fandefasana imailaka amin'ny alalan'ny Takelaka Fifandraisana ato aminay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
saingy (nitranga in-2) : Satria maro ireo andraikitra sahanin'ny vondrona saingy tsy mba miseho sy fantatra ivelany mihitsy izany, dia miara-miasa amin'ny vondron'ny mpamono afo ao amin'ny firenena Togo izy ireo mba hanamorana sy hampisosasosa ny tetikasa OpenStreetMap. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fanatontosana (nitranga in-2) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Edem (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
namorona (nitranga in-2) : Ao anatin'ny tanjon'izy ireo “hamahoahana(*1) ny teknolojia” dia namorona mpanonta printy 3D tamin'ny alalan'ny fitaovana elektronika notsimponina tany anaty fako ny Woelab: mpanonta printy miaro ny tontolo iainana avy amin'ny fomba fijery rehetra rehetra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
anaty (nitranga in-7) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
manandanja (nitranga in-2) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Vatsy (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
manerantany (nitranga in-1) : Ireny kinasa ireny no nanampy ny mpitarika ao an-toerana hampiditra feo vaovao sy tsy voasolotena loatra ho ao amin'ny tontolon-dresaka nomerika manerantany, mampivoitra ireo lohahevitra manandanja amin'ny fiarahamonina azy ireo manokana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
anelanelan' (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
ohatra (nitranga in-2) : Jereo ny lisitry ny kinasa (tetikasa) misy amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo vatsy teo aloha ho fakanareo ohatra. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ahitana (nitranga in-2) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
utilisant (nitranga in-1) : ]
lisitry (nitranga in-1) : Jereo ny lisitry ny kinasa (tetikasa) misy amin'izao fotoana sy ireo efa nahazo vatsy teo aloha ho fakanareo ohatra. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
lahatsoratra (nitranga in-2) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
natsangan' (nitranga in-1) : Niainga tamin'ny enina ka tonga 15 ny isan'ny mpikambana tao amin'ity laboratoara natsangan'ilay Togoley Sénamé Koffi Agbodjinou tamin'ny taona 2012 ity tao anatin'ny herintaona. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
nanamboarany (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
madinika (nitranga in-2) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Saripikan' (nitranga in-1) : Saripikan'ny Woelab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
noho (nitranga in-2) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fomba (nitranga in-4) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
MANGARAHARA (nitranga in-1) : PAIKA MANGARAHARA
mpandray (nitranga in-2) : Amin'ny alalan'ny fanazarana mivantana amin'ny famokaram-botoaty avy amin'ny fitaovana fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny teknikam-pintantarana ny mpandray anjara fiofanana no hahatsiaro ary fitaovana sy matoky tena amin'ny fampiasana ny fitaovana nanaovna fanazarana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
volavola (nitranga in-2) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tafiditra (nitranga in-1) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Nahazo (nitranga in-1) : Nahazo fisoratana anarana anarivony avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
lieu (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
jeunes (nitranga in-1) : Nanome akony ity fahombiazana ity tao anaty lahatsoratra tamin'ny volana Septambra 2013 ny habaka PA-Lunion, nanatsonga mpikambana iray ao amin'ny WoeLab, Edem Alomatsi:
Mpanoratra (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
nampandroso (nitranga in-1) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
isan' (nitranga in-5) : Izany no nitarika anay hampiakatra ny isan'ny vatsy hataonay loka amin'ity taona ity, na dia nihena kely noho ny taloha aza izany. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
rindrambaiko (nitranga in-1) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
suis (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
start (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tamy (nitranga in-15) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mitohy (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mampiasa (nitranga in-2) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
guide (nitranga in-1) : ]
donnée (nitranga in-1) : ]
hankany (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hamaly amin'ny fomba fohy (fero ny isan'ny caracteres) hahafahanareo mandrafitra ny eriteritrareo hankany amin'ny tena zavadehibe. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
manontany (nitranga in-2) : Misy fanontaniana iray ao amin'ny famenoana ny fandrotsahana volavola manontany anareo hilazalaza ireo hafa miasa miaraka aminareo, miangavy mba apetraho ao ny fampafantarana momba izany. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
réalisation (nitranga in-1) : ]
ihany (nitranga in-1) : Mety mampiasa tambajotra sosialy tahaka ny Facebook ihany koa ianao hampielezanao ny votoaty avy aminao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Alarobia (nitranga in-3) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
goro (nitranga in-2) : Voalohany indrindra, ny anarana hoe Jerry dia avy amin'ny teny Anglisy hoe Jerrycan, izay midika hoe goro (*3) na siny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
made (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
imailaka (nitranga in-1) : Aza misalasala manontany amin'ny alalan'ny fametrahana fanehoa-kevitra na fandefasana imailaka amin'ny alalan'ny Takelaka Fifandraisana ato aminay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
anareo (nitranga in-7) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Twitter (nitranga in-2) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mampihaona (nitranga in-1) : Sehatra misokatra ny WoeLab, toerana fiotrehana (*2) ara-teknolojika mampihaona ireo tanora mpankafy izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
delicious (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
those (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ifanaovana (nitranga in-1) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
nanararaotra (nitranga in-1) : Tsy mba afaka nanararaotra nanao fampiharana izy ireo ka ny tetikasa OpenStreetMap no hahafahan'izy ireo manatontosa izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Naka (nitranga in-1) : Naka sy nanambatra ireo faikan-javatra izahay ary nampifandray ireo singa rehetra mba hampandeha izany [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sein (nitranga in-1) : ] Je suis rentré en contact avec des etudiants de geographie et les ai proposé de leur faire la formation sur OpenStreetMap comme je le faisais au sein du WoeLab. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Ndong (nitranga in-1) : Niresaka momba ireo kinasany isankarazany tamin'ny alalan'ny mailaka tamin'i Amadou Ndong, mpilatsaka an-tsitrapo iraisam-pirenena ao amin'ny firenena miteny Frantsay Africaine d'Architecture, ary mandray anjara amin'ny tetikasa WoeLab, ny Rising Voice. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
raha (nitranga in-2) : Manasa anareo izahay hijery ny kinasa avy amin'ny toerana misy anareo na mitovitovy lohahevitra amin'izay kinasanareo ary trandraho raha misy fiaraha-miasa azonareo ifanaovana. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Voalohany (nitranga in-1) : Voalohany indrindra, ny anarana hoe Jerry dia avy amin'ny teny Anglisy hoe Jerrycan, izay midika hoe goro (*3) na siny. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Nilatsaka (nitranga in-1) : Nilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny OpenStreetMap aho [taloha. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
teknolojia (nitranga in-1) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
petit (nitranga in-1) : ]
imagination (nitranga in-1) : ] We use our imagination to start from those materials and just look at old computers… and see if it's possible. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
informatiques (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
work (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
durs (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
pratique (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
facebook (nitranga in-1) : (*3) goro : zavatra tsatokaty, azo asiana rano na zavatra hafa
mandrafitra (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hamaly amin'ny fomba fohy (fero ny isan'ny caracteres) hahafahanareo mandrafitra ny eriteritrareo hankany amin'ny tena zavadehibe. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hafa (nitranga in-6) : Mitady tompon'andraikitra kinasa (tetikasa) te-hizara fahaizana sy fahalalana amin'ny hafa izahay. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fablab (nitranga in-1) : Ity no fablab voalohany ao Togo. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Audioboo (nitranga in-1) : Mety ho tafiditra ao ny blaogy, blaogy bitika tahaka ny Twitter, rindrambaiko malalaka tahaka ny Audacity hamokaram-peo, SoundCloud, Audioboo, na Radioteca. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
maromaro (nitranga in-1) : Raha hanolotra volavola, tsidiho azafady ny pejy “Submit a Proposal” [mametraka kinasa], izay ahitanareo fanontaniana fohy maromaro manampy anareo mamaritra ny drafitry ny kinasanareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
tantarany (nitranga in-1) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Nampiofana (nitranga in-1) : ]
2007 (nitranga in-1) : Hatramin'ny 2007, efa nanohana tetikasam-pampitam-baovaon'olo-tsotra izahay tamin'ny alalan'ny fanomezam-batsy sy ny fitarihan-dalana ary nampandroso azy ireo ho ato amin'ny fiarahamonina Global Voices. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
Inona (nitranga in-1) : Nanontany an'i Amadou momba izany izahay:
matanjaka (nitranga in-1) : Amin'ity 2014 ity, dia mety hanome valisoa madinika anelanelan'ny $2000 ka hatramin'ny $2500 Amerikana hatramin'ny folo amin'ireo kinasa manana hevitra mazava sy matanjaka amin'ny fomba hanomezana fanazarana sy fanohanana mitohy amin'ny vondrom-piaramonina iray ao an-toerana izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
matetika (nitranga in-1) : Jereo ny Fanontaniana mitranga matetika hahalalanareo ny fampafantarana fanampiny. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
conçue (nitranga in-1) : Le WoeLab a conçue une imprimante 3D à partir de matériels électroniques récupères sur les décharges d'ordures, c'est une imprimante écologique [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hamahoahana (nitranga in-1) : (*1) hamahoahana [ny teknolojia]: hanao izay hahazoan'ny vahoaka rehetra [ny teknolojia] fr: démocratisation [de la technologie]. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
ahoana (nitranga in-1) : Mitady manokana izahay ny hanampiana ireo mpitarika izay avy amin'ireny vondrom-piarahamonina ireny ary mahafantatra hoe ahoana sy nahoana no ahafahan'ny mpikambana ao aminy misitraka ny fampitam-baovaon-olo-tsotra (median'olo-tsotra). (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
fois (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tokoa (nitranga in-1) : Nandritra ny telo taona nampanaovna fifaninanana hahazoana vatsy bitika, dia nahita ny fahaizana mikirakira fitaovana nomerika sy ny fifandraisana misidina avo dia avo tokoa izahay. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
ilay (nitranga in-2) : Raha tsy mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina ny nisoratra anarana, dia tsy maintsy ao anatin'ny fananganana sy ny fanatontosana ilay kinasa ny mponina ao an-toerana na mpikambana ao amin'ilay vondrom-piarahamonina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
chance (nitranga in-1) : Mais je pense l'utilisation des GPS et des cartes que nous imprimons pour collecter des données sur le terrain les a beaucoup intéressé : ils apprennent tout cela mais c'est chaque fois en theorie seulement ils n'ont pas souvent la chance de faire la pratique et donc le projet OpenStreetMap leur permettait cela [. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tetikasa (nitranga in-5) : manan-kevitra hanaovana tetikasa hanampiana ny vondrom-piarahamoina ao amin'ny faritra misy anao hampiasa ny median'olom-pirenena hilazalazany ny tantarany ve ianao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
kinasan' (nitranga in-1) : Miara-miasa amin'ireo mpianatra mitady mari-pahaizana lisansa amin'ny jeografia ao amin'ny oniversiten'i Lomé aho momba ny kinasan'izy ireo: fandraketana an-tsaritany ao amin'ny OpenStreetMap (OSM) sy ny fanatontosana torolalan'ny oniverisite hoan'ireo mpianatra vao afaka bka sy ny vahiny, ary ny mametaka ho afisy manerana ny oniversite ny sarintany voatonta amin'ny endrika lehibe. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
sehatray (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
masahina (nitranga in-1) : (*2) fiotrehana, avy amin'ny teny hoe miotrika izay midika hoe masahina amin'ny alalan'ny hafanana araka ny fahaiza-manaon'ny olombelona , ny akondro ohatra dia aotrika vao masaka sy azo hanina. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
fampafantarana (nitranga in-2) : Jereo ny Fanontaniana mitranga matetika hahalalanareo ny fampafantarana fanampiny. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
mitovy (nitranga in-2) : TOROLALANA
lalana (nitranga in-1) : Sehatra Vatsy Bitika Rising Voices 2014
iraisan' (nitranga in-1) : DINGAN'NY FANDROTSAHANA
together (nitranga in-1) : Afate, mpamorona ny printy 3D namboarina vita tamin'ny e-faikan-javatra nanazava ny fomba nanamboarany ilay printy:
fikambanana (nitranga in-1) : Ny fanantenanay dia mba afa-mifandray sy miasa miaraka ny fikambanana (fiarahamonina) mifanakaiky na mitovy lohahevitra trandrahina. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
hahatsangana (nitranga in-1) : Mandrisika anareo izahay hahatsangana zava-baovao sy ho sahy, nefa mahalala ny zavamisy amin'ny kinasa ataonareo. (Filazana Fifaninanana Rising Voices 2014 Hahazoana Vatsy Bitika)
récipient (nitranga in-1) : D'abord le nom Jerry vient du mot anglais Jerrycan qui veut dire récipient ou bidon. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
hanatontosa (nitranga in-1) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
tanora (nitranga in-2) : ny WoeLab dia sehatra fiarahamiasa hoan'ny “demaokrasian'ny teknolojia ”[en], natao hahafahan'ny tanora mampiasa solosaina sy fitaovana, izay manampy azy ireo hanatontosa hevi-baovao. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
mères (nitranga in-1) : C'est un ordinateur que nous montons en bidon comme vous le voyez, principalement avec des objets informatiques recyclés, des disques durs, des cartes mères déjà utilisées ou qui sont usagers quelque part et que les gens veulent jeter. (WoeLab Ao Togo: “Demaokrasian'ny Teknolojia”)
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/19_Martsa_2014&oldid=13915471"
Voaova farany tamin'ny 19 Martsa 2014 amin'ny 21:04 ity pejy ity.